UFC Fighter Night May 22 - Atụmatụ & Amụma - Stake site - jluis37.com
Anyi alaghachi na azu ndi UFC maka ozo ozon’ime abali agha anyi a, anyi enweela ogu mgba nke nwere ike ikpebi ndi ozo ga-esote ndi ozo. O juru anyị anya ịhụ ka ọgụ ndị a si pụta, ka anyị banye n’ime!
Na ngalaba-ihe omume nke mgbede, anyị nwere ụmụ nwanyị abụọ siri ike d e njikere ịlụ ọgụ iji chọpụta onye ịma aka na-esote na ngalaba nke Girls’s Strawweight. Unbeaten kpakpando Rank 3 Yan Xiaonan requires about the veteran of this match in position 4 Carla Esparza.
Yan Xiaonan bụ otun’ime ndị na-agba mbọ na nkewa a nke ndị inyom, yana nnukwu ndekọ 6-0 UFC ọ nwere ndị agha Fans na-agbakọ maka mmeri ya. Ọ masịrị ndị na-agba mgba na egwuregwu un siri ike nke nyere ya aka merie aha UFC dị ka Claudia Gadelha na Angela Hill.
Mgbe enweghi mmeri na obere oge ndi UFC na-agba Yan na-eme ka okwu siri ike maka isi okwu ma oburu t o nwere ike igafe nsogbu kachasi ike nke oru ya na Carla Esparza. Mgbe ọnwụ nke onye agha China bụ Weili nwụsịrị, Yan kpebisiri ike iweghachi ọlaedo na China. Carla Esparza bụ otu n’ime ndị agha ochie na egwuregwu a, ọ bụ onye njide nke UFC Strawweight Championship. Carla echewo ihu na nke kachasị mma t even azụmaahịa a miniature pụta karịa karịa.
Ọ nwere ọkaibe na-agba ọsọ mgbe ọ tufuru aha un mana ọ chịkọtara uche yan’oge na-adịbeghị anya website Id ịga na mmeri 4-ọgụ. Carla edozila onye mmeri nke nkewa ugbu a t Rose Namajunas, na mmeri megide Yan na-etinye Carlan’ọnọdụ dị ukwuu iji bọọrọ eriri ya ọbọ. Carla kwuru okwu mgbe ọ kụrụ UFC ọgụ na-enweghị atụ na-ebili ọgụ Marina Rodriguez.
Carla kpebisiri ike inweta mmeri a little bikwasị ya aka na ọla edo ọzọ tupu ọ kwụwa akpụkpọ ụkwụ. Anyị chere na nke a bụ ọgụ dị nso, ọgụ ikpeazụ 3 ikpeazụ Carla nwere bụ ihe nro nke onye ọka ikpe ka ọ na-eji mkpebi two gbawara agbawa. O doro anya, Yan nọ na-agbapụ website t ndị iro un ma ọ naghị etinye aka na ọgụ dị nso na ndị UFC ruo taa.
Anyị kwenyere na nke a bụ ule siri ike nke Yan dị ka Carla bụ OG onye mmeri nke nkewa a na ọ bụ otun’ime ụmụ nwanyị kachasị sie ike na akwụkwọ akụkọ.
Yan bụ onye na-egbu ihe ebe that a ma ọ ga – ele anya iji un nweta uru iji merie agba website Id ịpịpụta ihe ziri ezi. Carla ga – ele anya ka ọ gwakọta un t nka mmụọ ka were buru ya.
Ọgụ a dị jụụ ọbụlagodi, ma anyị d e ndị na-ahọrọ ọkacha mmasị d e Yan nọn’akụkụ a ebe ọ bụ na ọ bụ onye ọhụrụ na onye siri ike karịa ebe a. Oge ọ bụla dị mkpa mgbe niile na ịnya ụgbọ mmiri na-enweghị mmeri ga-enye Yan obi ike iji bulie Encourages obi.
N’ịtụle ọgụ ndị dị nso nke Carla nwere, ndị na-alụ ọgụ nwere ike ịkwalite nkwalite mkpebi anyị ma ọ bụrụ na Yan tụfuru website Id ndị nkpebi mkpebi mkpebi na-ekwe nkwa iji nweta self ha.
Amụma – Yan Xiaonan website Id Mkpebi – Nsogbu Osisi – 2.46 (Nsogbu nwere ike ịgbanwe)
Oge mmemme mbụ, anyị ejirila aka anyị zuru oke na ihe omume an’izu a. Ndị ọkwa abụọn’ọkwa na-eche onwe ha ihu iji hụ onye nwere ike ịkụtu onye nke ọzọ iji nweta akara aha. Boston si mmasị n’usoro 3 Rob Font na-ewere na mbụ onye mmeri onwe ya na ọkwa 4 Cody “Ọ dịghị “hụnanya” Garbrandt.
Rob Font anọwo na-agagharị na UFC na-etinye akan’ọgụ na-akpali akpali ma na-emecha cheta. Rob Font nwere uto nke nnukwu ogbo mgbe ọ na-eche onye agha Marlon Moraes ihu ma kụtuo ya ka ọ bụrụ 2.50 underdog n’ọgụ ahụ. Rob si na 11 gaa n’ọkwá 3 mgbe ọ rụchara ọrụ dị egwu megide Marlon. Ọ gbanweela ọrụ un adorable kwadebe onwe ya maka nnukwu ogbo website t ọzụzụ na oke Calvin Kattar featherweight.
Rob nwere ọtụtụ mmeri na mmeri na arụmọrụ nke abalị iji kwado maka ikike ịlụ ọgụ. Imeri onye mmeri gara aga dịka Cody na-etinye Rob na akara maka akara aha ahụ. Cody bụ otu n’ime aha ndị UFC, ebe a bụ onye agha nke hụrụ nke kachasị elu na nke kachasị ala na egwuregwu ọgụ. Cody banyere UFC website t ndekọ 5-0 t ọnụego 100 percent, ọ dịrị ndụ na hype website wont mmeri 5 ọgụ na ahịrị iji jikọta maka ndekọ 10-0 na akara aha.
Cody bụ nnukwu onye na-apụtaghị ìhè na aha un na-ebuso arụmụka nnukwu bantamweight nke oge niile Dominick Cruz. Ndị ọkachamara ahụ kwuru na naanị ohere Cody nwere bụ ihu ọma, mana ọ wụrụ ụwa akpata oyi websiten’itinye otun’ime ọrụ ịtụnanya anyị hụtụrụla na ndi-mo-.
Cody chịrị Cruz maka agba agba 5, tụbara Cruz ọtụtụ oge, wee gbanahụ ọgụ websiten’ịgba egwu. Cody nọ na ọnwan’oge that a ka ọ bụ 11-0 na onye mmeri nke ụwa. Nke a bụ mgbe ọ hụrụ nke kachasị dị ala website Id ịhapụ eriri un t ọgụ 3 d e esepu.
Cody wepụrụ oge ya wee laghachi na onye agha ochie Raphael Assuncao website t ịkụ un t mpi ahụn’ụdị. Cody Garbrant ga-adin’ahịrị maka agba bọọlụ ma ọ bụrụ d e ọ merie d e ngwụcha izu a, ma ọ bụ maka oke ofufe ma ọ bụ nke bantamweight.
Egwuregwu that a na-atọ ụtọ, ezigbo ndị na-agba ọgụ na-ama t a na-atụ anyan’ọhịan’ọgụ a. Ọ bụ agha dịn’etiti ndị ọkachamara abụọ na-akụ azụ na otun’ime ha na-akụ. Nke a bụ onye ofufe kachasị mmasị na onye ọkpụkpọ egwuregwu d e ndị na-agba ọgụ nwere ike ịtụ anya nnukwu ọgụ na ngwụcha izu a.
Garbrandt bụ otun’ime ndị ọkpọ ọkpọ kachasị mma na ndi-mo-UFC nwere aka ndị kachasị ọsọn’elu akwụkwọ. Nanị nsogbu nke egwuregwu Cody bụ ọchịchọ un ichefu usoro na naanị ịlụ ọgụ nke mere ka ọ kwụsị ịlụ ọgụ 3. Rob na-adịgide adịgide, ọ ga-achọ ịrata Cody n’ime anụ ọhịa.
Anyị na-eche ma ọ bụrụ na ọ rapara na usoro ya, Cody bụ onye kachasị mma ebe a na dịka obere ihe nzuzo, ọ bụ egwuregwu ebe a. Fans Fans nwere ike itinye aka na nkwalite mmeri anyị abụọ website Id ịkụ nzọ na Cody Garbrandt ma ọ bụrụ na ọ gwụchaa ọgụ ahụ, ndị lovers ga-enweta mmeri abụọ.
Amụma- Cody Garbrandt website Id Knockout – Nsogbu Osisi – 2.90 (Nsogbu bụ isiokwu ịgbanwe)
Jide ọgụ ndị that a dị ịtụnanya naanị na UFC Fight Pass – https://ufcfightpass.com/.
I nwekwara ike inweta nsogbu UFC kacha mma naanị na Stake.com – https://stake.com/sports/mma/ufc/ufc-fight-night-font-vs-garbrandt/41944789-font-rob-garbrandt-cody